कोरोनाको कहरः विश्वलाई चकित पार्ने चीनको अर्को योजना
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनले गरिरहेको कोशिस संसारको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र आक्रामक रहेको बताउँदै आएको छ ।
तर अब वुहानका पुरै जनताको १० दिनमा कोरोना टेस्ट गराउने बताएर चीनले संसारलाई अर्को आश्चर्यमा पारेको छ । वुहान गत वर्षको जनवरीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बनेको थियो ।
सबैभन्दा पहिले गत वर्षको डिसेम्बरमा यहाँ कोरोना भाइरस देखिएको थियो । वुहानको मात्रै जनसंख्या १ करोड १० लाखभन्दा बढी रहेको छ । स्थानीय प्रशासनले वुहानका पुरै जनताको कोरोना परीक्षण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका छन् ।
यो योजनाअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने र सबैभन्दा बढी जोखिम भएका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण गरिनेछ ।
त्यसपछि परीक्षण चरणबद्ध रुपमा गरेर सबैको नमुना संकलन गरिनेछ । चीनको यो महत्वाकांक्षी योजनाअनुसार हरेक दिन १० लाखभन्दा बढी मानिसको कोरोना परीक्षण हुनेछ । हाल त्यहाँ दैनिक ४० देखि ६० हजारसम्म परीक्षण क्षमता रहेको छ, जसलाई ठूलो मात्रामा बढाउनुपर्नेछ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित काउन्सिल अफ फरेन अफेयर्समा ग्लोबल हेल्थका सिनियर फेलो यानजोङ हुआङ भन्छन्, ‘हामी कुनै चमत्कार हुने विश्वास गर्न सक्छौं ।’
किन यति धेरै परीक्षणको उद्देश्य राखियो ?
गत साताको अन्त्यमा वुहानमा रहेको एक कम्प्लेक्समा ६ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि यो कदम चाल्न लागिएको हो । यी नयाँ संक्रमितमा कुनै लक्षण थिएन । तर परीक्षणमो पोजेटिभ पाइयो । यस्ता घटनालाई एसिम्प्टोमेटिक भनिन्छ जसमा संक्रमणका कुनै लक्षण हुँदैनन् ।
यसपछि कम्प्लेक्समा आएका ५ हजार मानिसको परीक्षण गराउन आदेश दिइएको थियो । यसरी परीक्षण गरिने १ करोड १० लाखमध्ये केही यसअघि क्वारेन्टाइनमा निश्चित संख्यामा घर गएका छन् भने केहीको हालैका सातामा परीक्षण भएको छ । यसकारण परीक्षण सुरु भएपछि अधिकारीहरुका लागि यो धेरै कठिन हुनेछैन ।
४० देखि ५० लाख वुहानका मानिसहरुको पहिले पनि परीक्षण भइसकेको छ । वुहान युनिभर्सिटीका रोगसम्बन्धी जीव विज्ञानका उपनिर्देशक यांग झान्कीले भने, ‘वुहान बाँकी ६० देखि ८० लाख मानिसको परीक्षण १० दिनमा गर्न सक्षम छ ।’
यदि वास्तममा ६० देखि ८० लाख मानिसको परीक्षण १० दिनमा गर्न पनि हरेक दिन ८ लाख मानिसको परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यो निकै चुनौतिपूर्ण हो । २२ अप्रिलमा हुबेईको प्रान्तीय सरकारले हरेक दिन ८९ हजार मानिसको परीक्षण गरिएको बताएको थियो ।
यसमा हुबेईको राजधानी वुहानमा हुने परीक्षण पनि सामेल छ । त्यहाँ हरेक दिन ६३ हजार मानिसको परीक्षण गरिएको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार १० मेमा वुहानमा ४० हजारको मात्र परीक्षण भएको थियो ।
यति छिटो लाखौं मानिसको परीक्षण किन ?
केही आशावादी मान्छे भन्छन्, ‘यदि चीन सरकारले आवश्यकता ठान्यो भने सम्भव छ ।’
१३ मेमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यममले वुहानका अधिकारीहरुको हवाला दिँदै ठूलो मात्रामा परीक्षणको काम थर्ड पार्टी कम्पनीको सहयोगमा गरिने उल्लेख गरेका थिए । स्थानीय अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मी पठाएर नमुना संकलन गर्ने काम गर्छन् ।
अधिकारीहरुको अनुुसार थर्ड पार्टी परीक्षण क्षमता एक लाख प्रतिदिन रहेकाले पनि यति कम समयमा नै ठूलो परीक्षणको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ ।
त्यसकारण चरणबद्ध रुपमा परीक्षण गरिनेछ । केही जिल्लामा १२ मेमा सुरु हुनेछ भने केही जिल्लामा १७ मेदेखि सुरु हुनेछ । सबै जिल्लामा १० दिनमा परीक्षणको काम सकिनेछ ।
चीनका उद्योगमन्त्रीले गत महिना चीनले हरेक दिन ५० लाख टेस्ट किट तयार गर्न सक्ने बताउँदै नमुना संकलनका लागि धेरै परीक्षण केन्द्र र प्रयोगशाला तयार भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
प्राध्यापक याङ भने कसैको छिमेकमा कुनै संक्रमण नभएमा एक एक जनाको परीक्षण आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनले ग्लोबल टाइम्ससँग कुराकानीमा भने, ‘एक पटक नेगेटिभ आएपछि कुनै संक्रमित हुनसक्छ । महामहारीको हालको अवस्था जान्नका लागि विज्ञानको सहारा लिनु आवश्यक छ ।’
दोस्रो चरणको संक्रमण
संसारका धेरै देशमा एक पटक लकडाउन खुकुलो पार्न थालेपछि दोस्रो चरणको संक्रमणको लहर टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । वुहानमा ८ अप्रिलपछि ११ साताको कडा लकडाउन खुकुलो पारिएको थियो । तर नयाँ संक्रमण देखिएपछि दोस्रो चरणको संक्रमणको खतरा उत्पन्न भएको छ ।
चीनका अन्य सहरमा पनि यस्ता कदम चालिएको छ । रेल सेवा रद्द गरिएको छ भने सिनेमा, जिम र इन्टरनेट क्याफेसमेत बन्द गर्न थालिएको छ । चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका प्रमुख इपिडिमियोलोजिस्ट वु जुनयोका अनुुसार नेगेटिभ रिपोर्ट आएर पनि पुनः संक्रमण देखिन थालेपछि सरकार सतर्क भएको हो ।
उनले भने, ‘वुहानमा यस्ता एकभन्दा बढी संक्रमण पाइएका छन्, जसमा ३० देखि ५० दिनसम्म संक्रमणको अवधि छ । भाइरस कमजोर इम्युनिटी भएका मानिसमा धेरै दिनसम्म रहन सक्छ ।’
यद्यपि जसको छिमेकमा समेत कुनै संक्रमण छैन, उसले परीक्षण नगराएपनि फरक नपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार वुहानको सबै जनताको परीक्षण गराउने काम धेरै खर्चिलो हो ।
उनले भने, ‘तर यो चीन हो भन्ने कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ । जसरी यहाँ लकडाउन लागू गरिएको थियो, त्यो पनि कम खर्चिलो थिएन । तर यसको उद्देश्य कुनै पनि मूल्यमा अधिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १, २०७७, २०:०४:००
जी–७ को राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्प- चीनलाई छोड्ने, भारतलाई जोड्ने योजना